Ubambiswano lwe-Delta kunye ne-TSA yolungelelwaniso lokungena, ukhuseleko kwihabhu yaseAtlanta
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Technology » Ubambiswano lwe-Delta kunye ne-TSA yolungelelwaniso lokungena, ukhuseleko kwihabhu yaseAtlanta
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Inketho ekhokelela kumzi-mveliso kubathengi be-TSA PreCheck ye-Delta inyusa itekhnoloji yokuqaphela ubuso ukuze ihambise amava e-airport ukusuka kwinqanaba ukuya esangweni.
Itekhnoloji entsha inikezela abathengi ngendlela efanelekileyo yokuhamba kwisikhululo seenqwelomoya-ngaphandle kokubonisa iphepha lokukhwela iphepha okanye isazisi sikarhulumente.
Isazisi somthengi sedijithali senziwe ngenombolo yabo yencwadana yokundwendwela kunye ne-TSA PreCheck okanye iNombolo yokuHamba kweLizwe eyaziwayo yokuHamba kwaye iqinisekiswe yitekhnoloji yokwamkelwa kobuso.
Izixhobo zokuqonda ebusweni ziya kuqala ukubonakala kwindawo yokujonga i-Atlanta yoKhuseleko lwaseMzantsi kwiiveki ezizayo.
Abakhweli beenqwelomoya kunye nobulungu be-TSA PreCheck kunye nenombolo ye-Delta SkyMiles, kungekudala banokhetho lokufumana uhambo olukhawulezileyo kwisikhululo seenqwelomoya. IHartsfield-Jackson Atlanta kwisikhululo senqwelomoya.
Kuqala ukutyhilwa kwiindawo zokujonga ukhuseleko eDetroit ekuqaleni kuka-2021, Delta Air LinesAmava esazisi esidijithali lishishini lokuqala kubambiswano olukhethekileyo kunye ne-TSA PreCheck. Amava ayanda ukuya Atlanta, Ukunikezela abathengi ngendlela efanelekileyo yokuhamba kwisikhululo seenqwelomoya-ngaphandle kokubonisa iphepha lokukhwela iphepha okanye isazisi sikarhulumente. Ngokujonga nje ikhamera, abathengi abakulungeleyo ukungena banokukhetha ngokulula nangokufanelekileyo ingxowa, badlule kwi TSA Precheck umgca wokhuseleko kwaye ukhwele inqwelomoya yabo.
Isazisi somthengi sedijithali senziwe ngenombolo yabo yokundwendwela kunye TSA I-PreCheck okanye i-Global Entry Known Traveler Number kwaye iqinisekiswe yitekhnoloji yokwamkelwa kobuso, eqinisekisa ukuba ungubani na umhambi kwiindawo zokucofa isikhululo seenqwelomoya. Izixhobo zokuqonda ebusweni ziya kuqala ukubonakala kwi AtlantaIndawo yoKhuseleko yoMzantsi Afrika kwezi veki zizayo kwaye iya kwanda ukukhetha iibhegi zokuhla kunye neendawo zokukhwela ngaphambi kokuphela konyaka. Delta Air Lines ijolise ekwandiseni ukuya kwii-hubs ezongezelelweyo kunyaka ozayo ukuqinisekisa ukungahambelani, amava okungahambelani nokuhamba kuyo yonke inethiwekhi.
"Ukwanda okukodwa kwesazisi esidijithali kushukumisela iDelta inyathelo elinye kufutshane ekufezekiseni umbono wethu wokwenza uhambo olumntu ngakumbi nolunxulumene ngokupheleleyo," utshilo u-Byron Merritt, Delta Air LinesUsekela-Mongameli woYilo lwamava eBranti. "Injongo yethu kukuguqula amaxesha abalulekileyo anje ngokhuseleko kunye nokungena kumava angenamthungo kukunika ixesha kwaye sigxile kwimizuzu abathengi abayonwabelayo. Izinto ezintsha ezinje ngobuchwephesha bedijithali ziyaphunyezwa ngeenjongo zokuguqula amava ohambo oluhambelanayo lube luhambo abathengi bethu abanokulindela lukhulu kulo. ”
Kuzo zombini Atlanta kunye neDetroit, ubuchwephesha bedijithali yasekhaya bakhela kwindlela yokubona yobuso yaseDelta yokuhamba kumazwe aphesheya, ethi i-Delta iqale ukuvavanya ngaphezulu kweminyaka emihlanu eyadlulayo kwaye yaphelela ngokusungulwa kwesiphelo sokuqala sebhayometriki e-Atlanta e-2018.
Induli yeZidone uthi:
Oktobha 20, 2021 kwi-16: 24
Kufuneka nje ujonge kwimbali kwaye ubonise amanye amazwe ... "Uncedo" kunye "noncedo kubathengi" yindlela i-China ethengise ngayo ukuqondwa kobuso "kwizixeko ezikrelekrele" kunye nenkqubo yokulinganisa amanqaku etyala ukuze ikhombe abemi bayo.